Nagarik News - प्रियंकाको जम्पकट
25 Aug 2013 | 12:02pm
'यहीँ यति राम्रो छ, किन जानुपर्‍यो अमेरिका ?'
जसलाई आफ्नो योजना बताए पनि यस्तै प्रतिक्रिया पाउँथिन्, प्रियंका कार्की । हुन पनि ६ वर्षअघि अमेरिकाको भिसा लाग्दा थुप्रै उपाधि उनको नामसँग जोडिएको थियो — मिस टिनको ताज, चल्तीकी मोडल, टिभी कार्यक्रमकी हिट प्रस्तोता आदि आदि ।
तर, उनले अरूका कुरामा मन डुलाइनन् ।
अलाबामा स्टेट युनिभर्सिटीमा फिल्म पढ्ने योजनामा अडिग रहेकी उनी अमेरिका नपुगुन्जेल सपना हैन, अतितमा हराइन् ।
नौ वर्ष छँदा नै आबद्ध हुन पुगेको मनोरञ्जन दुनियाँले उनको ध्यान तानिरह्यो । नारायण पुरीले 'महादेवी'मा सुनील थापाकी छोरी बनाएर खेलाउँदा उनी कत्ति रमाएकी थिइन् ।
'सुटिङभरि घरमै गाडी लिन÷पुर्याउन आउँथ्यो । सेटको तामझाम, डबिङको रमाइलो, आहा !' नेपाल छँदा हेक्का नगरेको विषयले उनलाई तान्यो, 'बालमष्तिस्कमै गढेको रहेछ, कलाकार बन्ने सपना ।'
उनी खुब फिल्म हेर्थिन् । भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नाचेको देख्दा त्यस्तै नृत्यांगना हुने सपना देख्थिन् । ऐना हे¥यो । लिपस्टिक लायो । नाच्न थालिहाल्यो । फिल्ममा डाक्टर देख्दा त्यस्तै हुन मन लाग्थ्यो । पेट चिर्ने पेसाको हैन, फिल्मको डाक्टर । पार्टीमा कसैले 'नाच न' मात्र भन्नुपथ्र्यो, उनको कम्मर मर्किहाल्थ्यो ।
एयरहोस्टेज आमाको पछि लागेर धापासीका आफन्तको पार्टीमा जाँदा कसैले भन्यो, 'तिमी त कस्तो राम्रो नाच्छौ है ।'
'हो त नि,' जवाफसँगै उनले आफ्नो स्टेप देखाएकी थिइन् ।
पल्लो घरको झ्यालबाट १३ वर्षकी प्रियंकाको प्रतिभा नियालिरहेका रहेछन्, कलाकार सन्तोष पन्तले । उनले स्पटमै 'हिजो आजका कुरा'मा खेल्ने प्रस्ताव अघि सारे । ८ देखि १० कक्षासम्म पढ्दाको बिदा–फुर्सद उनले त्यही सिरियलमा उपयोग गरिन् ।
पढाइ र अभिनय सँगसँगै अघि बढाउन निकै गाह्रो हुँदो रहेछ । पढाइ उकालो लाग्दै गयो, उनी अभिनयबाट टाढिँदै गइन् । रातो बंगला स्कुलमा 'ए' लेभलका होनहार विद्यार्थी हुने होडमा थिइन् ।
'रिवेल क्रियसनले भरत सिटौलाको गीतको भिडियो बनाउँदै छ, तिमी मोडलिङ गर्छौ ?' एक अपरिचित महिलाले सफा टेम्पोभित्रै यस्तो अफर गर्दा उनी झस्किइन् ।
'एक दिनको सुटिङ हो, ल मेरो कार्ड लग र खबर गर,' अब बाल कलाकार हैन, तन्नेरी मोडलको रोलले उनलाई कुरिरहेको थियो ।
'टेम्पोमा भेटिएकी प्रिया दिदीले मेरो घरै पत्ता लगाएर, ममी ड्याडीलाई भेटेर, पकेट मनीको व्यवस्थासहित भिडियो खेलाउनुभयो,' उनी 'माया लाउन त धेरैले खोजे' भन्दै मायाको भिख माग्ने गायक सिटौलाकी मोडलमा दर्ता भइन् ।
त्यसपछि 'ए' लेभलको परीक्षा सकाउनेबित्तिकै 'ट्राई मारेको' मिस टिन प्रतियोगितामा शीर्ष ताज मिल्यो । कार्यक्रमका निर्णायक थिए, भुषण दाहाल र मिस नेपाल प्रिती सिटौला ।
'के बन्ने इच्छा छ ?' निर्णायकको प्रश्नमा उनले दायाँबायाँ नचोसी जवाफ दिइन्, 'टेलिभिजनको होस्ट ।'
कान्तिपुर टेलिभिजनमा आबद्ध दुई निर्णायकलाई प्रियंकाको जवाफ मनप¥यो ।
'मिस टिन भएको १२ दिनमै कान्तिपुर टेलिभिजनमा फिल्म र फेसनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाएँ,' उनी ग्राफिक्स डिजाइनर विश्वदीप लामिछानेको सहयोग अहिले पनि सम्झन्छिन् ।
त्यसपछिका दुई वर्ष उनको करिअर खुब फस्टायो । विज्ञापन र म्युजिक भिडियोमा त राज गरेकै थिइन्, आलोक नेम्वाङले 'सानो संसार'मा खेल्ने अफर गरे । एउटा मोडल राम्रो व्यानरको फिल्ममा फड्को मार्न पाउँदा खुसीले उफ्रिनुपर्ने, प्रियंकालाई चिन्ताले समात्यो ।
'ए लेभलको सर्टिफिकेटमै चित्त बुझाएर बसे १० वर्षपछि के होला जिन्दगी ?' हिरोइन नबन्दै उनले 'रिटायर्डरोइन'को जिन्दगी देख्न थालिन् । भाउजू र आमाको रोल गर्ने कलाकार उनको दिमागमा झल्झल्ती घुम्न थाले । त्यतिबेला हुनसक्ने 'फ्रस्टेसन' र पढाइ पूरा नगर्दाको पछुतोले कति पिरोल्ला भनेर गम्भीर बनिन् ।
'सके चार वर्षपछि आएर फेरि जमौंला, नसके यो क्षेत्रलाई बाईबाई ।'
विमान अमेरिकी भूमिमा अवतरण भयो, उनी पुराना तर्कनाबाट वर्तमानमा उभिइन् ।
विरानो ठाउँमा पुरानो परिचय बिकेन । नेपाल छँदा टुसाएको 'सेलिब्रेटी भ्रम' त्यहीँ सकियो । फिल्म मेकिङ पढ्न गएकी प्रियंका अरू विद्यार्थीजस्तै संघर्षमा जुटिन् । पढाइ र काम सँगसँगै अघि बढाइन् ।
दुई वर्ष अभिनय र दुई वर्ष निर्देशनको पढाइ पूरा गरुन्जेल आफू निकै 'हम्बल' भएको अनुभव गरिन् । नेपालमा गरेर र अमेरिकामा पढेर बुझेको 'फिल्म मेकिङ'मा ठूलो अन्तर देखिन् । पढेकोमध्ये कुनचाहिँ चिज नेपालमा तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिएला भन्नेले उनको मथिंगल घुमाउँथ्यो ।
नेपालमा डिजिटल फिल्मको विकास देख्दा उनलाई अमेरिका नआएको भए पनि हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो । 'कागबेनी', 'फस्ट लभ' जस्ता आफ्नै कित्ताका मान्छेले बनाएको फिल्ममा आफूलाई नपाउँदा बेलाबेला छट्पटिन्थिन् । 'पढाइ सकिएपछि झन् तगडा भएर काम गर्छु नि,' केही शान्त हुन्थिन् ।
उनी नेपाल फर्कने 'काउन्ट डाउन'मा लागिन् । 'अमेरिका छाडेर किन फर्कने ?' साथीभाइको जमातले उनलाई फेरि रोक्न खोज्यो । उनी आफ्नो निर्णयमा प्रस्ट थिइन् । फर्किइन् ।
'अब कहाँबाट काम सुरु गर्ने ?' दुई वर्षअघि कन्फ्युज्ड थिइन्, 'फिल्म निर्देशन नै गर्दा ठिक होला कि !'
नजिकका केहीले सल्लाह दिए, 'तिमीले बुझेकोजस्तो छैन फिल्म उद्योग । पहिला यसलाई बुझ अनि फिल्म बनाउन थालौला ।'
अब उनी आफू अमेरिकाबाट फर्किएको जानकारी फिंजाउनतिर लागिन् । र, कम्तिमा एक वर्ष अरूका फिल्म खेलेर उद्योग जान्ने योजना बनाइन् ।
म्युजिक भिडियो खेल्दाका चिरपरिचित क्यामराम्यान विदुर पाण्डेले फिल्म 'मेरो बेस्ट फ्रेन्ड'मा प्रियंकाको सिफारिस गरिदिए । यो फिल्म अझै रिलिज नभए पनि उनको पुनरागमनको जानकारी दिलाउने काम मजैले भयो । सुरेशदर्पण पोखरेल 'थ्री लभर्स'को प्रस्ताव लिएर गए । प्रियंकाले रोल र निर्देशक छानिनन् । 'हुन्छ' भनिन् । त्यसपछि 'कलिउड', 'भिजिलान्ते' र 'झोले'को लाइन लाग्यो ।
उनले यी फिल्मलाई उद्योग जान्ने अवसरका रूपमा मात्र लिइन् ।
छैठौं फिल्म 'सुन्तली'ले भने उनलाई निकै आशावादी तुल्याएको छ । त्यसमा शीर्ष भूमिका मिलेकाले मात्र उनलाई त्यस्तो लागेको होइन । 'मैले सिकेको फिल्म मेकिङको फ्लेवर यसमा छ,' उनी भन्छिन् ।
सातौं फिल्म 'आवरण'पछि त उनी अभिनयमा निकै रत्तिन थालेकी छिन्, जसले उनको निर्देशक बन्ने योजना नै पर धकेलेको छ ।
'निर्देशनमा लागेपछि कसैले हिरोइन खेलाउलान् जस्तो लाग्दैन,' उनले उद्योगको मनोविज्ञान राम्रैसँग बुझिछन्, 'कत्ति न निर्देशक भई खा कि, आफैंले बनाएको फिल्ममा खेलोस् न भन्छन् । त्यसैले पाउन्जेल अभिनय नै गर्ने हो ।'
'निर्देशक बन्न ढिलो हुँदैन, उमेर ढल्केपछि हिरोइन भइन्न,' उनको निष्कर्ष छ ।
फिल्म क्षेत्रलाई 'अनपढहरूको भीड' ठान्ने जमातसँग प्रियंकाको पनि चिनजान छ । उनी नपढेकाले भन्दा अन्त असफल भएर आएकाले उद्योग ओगट्दा गलत सन्देश गएको ठान्छिन् । कलाकारले 'ए फर एक्टिङ' भनेरै पढ्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन उनलाई । कोही अभिनयलाई 'गड गिफ्ट' मान्छन् भने उनीहरूलाई सुझाव दिन्छिन्, 'तपाईंले सैद्धान्तिक ज्ञान पनि लिनुभयो भने त झन् सबैलाई पछि पार्नुहुन्छ ।'
लुगाको साइज छोट्याएर हिरोइन बन्ने र पैसा हालेर हिरो बन्नेसँग उनको गुनासो छ । उद्योगमा 'युजलेस' मान्छेले समस्या पारेको उनले देखेकी छन्, केही विकृति र विसंगतिको राम्रै चाल पाएकी छन् ।
हिरोइनमाथि होलसेलमा गरिने टिप्पणीसँग भने उनी पटक्कै सहमत छैनन् ।
'निर्मातासँग रात बिताएर फिल्म खेल्ने र कास्टिङ काउच बन्न तयार हुनेहरू हलिउड र बलिउडमा पनि छन् । नेपालमा त्यसको प्रभाव नै परेको छैन भनेर म दाबी गर्दिन । तर, चरित्र कस्तो बनाउने भन्ने व्यक्तिमा भर पर्छ । आफूमा क्षमता र आत्मविश्वास छ भने फिल्म खेल्न कसैसामु समर्पण हुनुपर्दैन,' उनी भन्छिन्, 'कुनै निर्माता मसँग हिँड भन्न आएका छैनन् । कसैले त्यस्तो भन्छ भने म त सिधै बंगारा झार्दिन्छु होला ।'
नाम चलेका धेरै हिरोइनको दुःखदायी अन्त्यको कथा उनले पढेकी छन् । नेपालमा पनि त्यस्तो नमूना देखेकी छन् उनले ।
'बाटोमा पानीपुरी खाँदै हिँडेको भोलिपल्टै, अझ भनौं रातारात कोही सफलताले आकास छोएको पाउँछन् भने त्यसलाई ह्यान्डिल गर्न गाह्रो हुन्छ । झन् हिरोइनहरू त कुन बेला सफलताको शिखरबाट भुइँमा आइपुग्छन् पत्तो हुँदैन,' त्यो अवस्थालाई यथार्थ ठानेर अपनाउनसक्ने खुबी हिरोइनमा हुनुपर्ने तर्क गर्छिन् उनी ।
'संसारमा मजस्ता राम्री केटी अरू पनि छन् भनेर बुझ्नेहरू हिरोइन जीवन सकिएपछि सहज बाँच्छन्,' भन्छिन् २५ वर्षीया प्रियंका ।
नेपाली फिल्ममा देखिने र सुनिने विकृतिले उनलाई चिन्तित तुल्याएको छैन ।
'मैले सुनको संसार ठानेर यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको होइन । नेपाली फिल्मलाई अस्करमा पु¥याउने असाइन्मेन्ट बोकेर आएको पनि होइन,' राम्रो टिम र राम्रो फिल्म प्रियंकाको प्राथमिकतामा छ ।
'प्रियंका निर्देशक भएपछि कस्तो फिल्म बनाउलिन् ?'
'चेन्नाई एक्सप्रेस जस्तै ।'
नेपालबाट करोडौं कमाउने यस्तो फिल्मलाई हेपेको उनलाई मन पर्दैन र नेपाली दर्शक प्रयोगात्मक फिल्मका लागि तयार भइसकेको पनि ठान्दिनन् ।
दर्शकका लागि पाँचवटा फिल्म बनाउन सके आफ्नो लागि एउटा फिल्म बनाउने योजना तय गरिसकेकी छन् उनले ।
'फिल्म निर्देशन नफापे के गर्ने ?'
'आफूलाई जान्ने ठाने पनि यो काम मेरो लागि होइन रहेछ भन्ने सम्झने, अमेरिकाको बाटो तताउने । यहाँ डिप्रेस्ड भएर नबस्ने,' ग्रिनकार्ड होल्डर प्रियंका भन्छिन्, 'पहिला प्याजको बोक्रा छोडाउने, गुदीको खोजी गर्ने । केही नभेटिए विकल्प अपनाउन नहिच्किचाउने ।'
प्रियंकाको फिटनेस फर्मुला
– सानो स्केलमै भए पनि आफूलाई दर्शकको रोलमोडल ठान्ने हो भने अनुशासनमा बस्नै पर्छ । खाँदा, हिँड्दा, लगाउँदा सचेत नभए 'स्टार पावर' टिक्दैन ।
– हिरोइनहरू फिट सेपमा रहनैपर्छ । फिल्मको रोलअनुसार मोटाउने दुब्लाउने बाहेक दर्शकलाई 'छि यस्को त कस्तो टायर जस्तो जीउ' भन्ने मौका दिनु हुँदैन ।
– म बिहान जुम्बा गर्छु । थोरै खान्छु, पटकपटक खान्छु । भातको पहाड लगाएर खाँदा त फिट भइन्न नै, नखाएर पनि हुँदैन । डाइट चार्टमा अडिन सक्नुपर्छ । 'हेल्दी इटिङ'मा सचेत हुनुपर्छ ।
– कहिलेकाहीँ कपाल मिलाउन, मेकअप गर्न मन लाग्दैन । त्यस्तो बेला घरमै बस्नुस, भुत्ल्याए जस्तो अनुहार बनाएर ननिस्कनुस् ।
– धेरै ड्रिङ्स नगर्नुस् । जात्रा देखाउने गरी पिउँदा इमेज र अनुहार बिग्रिन्छ । स्वस्थ हुने र स्किन नबिगार्ने हो भने चिल्लो पदार्थ धेरै नखानुस् ।
– शरीरमात्र फिट राखेर हुँदैन, दिमाग पनि शान्त राख्नुपर्छ । आँखा बन्द गरेर सफ्ट म्युजिक बजाउँदै त्यसको भावअनुसारको तालमा विस्तारै शरीर चलाउँदा स्ट्रेसबाट तुरुन्तै छुट्कारा पाएको अनुभव गर्छु । यसो गर्दा मेडिटेसनकै आनन्द मिल्छ ।
– क्वालिटी टाइम पाउन महिनाको तीन दिन, जरुरी काम नभएको बेला मोबाइल अफ गरेर घरमै बस्छु, सुत्छु, लभस्टोरी पढ्छु र डिटक्सिफाइङ भएको अनुभव गर्छु । बनावटी 'हाई !' र प्रोफेसनल स्माइलबाट पनि बेलाबेला छुट्कारा लिनुपर्छ ।
« 'चक्लेट' निर्देशन गर्दै गैंडा रोमान्टिक किताब पढ्दै प्रियंका द बुक एन्ड द कभरमा ब्यस्त »